Alahady 19 Janoary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 19 JANOARY 2020 - COLISEUM ANTSONJOMBE
FANOMPOAM-PIVAVAHANA NITONDRANA AM-BAVAKA NY FILOHAN'NY FJKM MIANAKAVY SY NY TAOM-PIASANA 2020
« Maneho ny tana-maheriny ny Tompo Andriamanitra »
Notanterahina izao alahady izao teny amin’ny Coliseum Antsonjombe ny fanompoam-pivavahana niombonan’ny fianakaviamben’ny FJKM nitondrana am-bavaka ny Filohany sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2020. Vory lanina tokoa ny mpianakavin’ny finoana protestanta tonga teny, ny fiangonana tsirairay moa dia samy nikatona avokoa.
Ny Mpitandrina Zarazaka Jean Louis, Filoha mpanampy ao amin’ny Birao Mpiandraikitra Foibe, no nitarika ny fanompoam-pivavahana, nanaraka ny litorjia amin’ny endriny voalohany ary ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka Hary Masy, mpanolotsaina ao amin’ny Birao Mpiandraikitra Foibe no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Filohah’ny FJKM ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi kosa dia nandray fitenenana nandritra ny fotoanan’ny asa vavolomobelona.
Ny hira faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM “Mahareta” (Rabarijoelina Zo Oméga) ny hira nentina nanombohana ny fotoana. Notononina avy eo ny teny fampidirana ary nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SAL 93 : 1-5, noredonina ny hira FFPM 6 « Avia, miondreha » ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana
Ny tenin’ny Soratra Masina tao amin’ny Isa 41, 10-13/ Sal 119, 1-2 no nentina nanambarana izany, Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 460 and 2-4 “Ario ny tahotrao”
Notanterahina ny vavaka fifonana, Ny hira FFPM 599 : 2-3 “O ry Jesoa mifaly ny foko” no nohiraina ho fifonana amin’ny Tompo.
Ny teny tao amin’ny bokin’ny Isa 46, 4-9 / Sal 32, 1-2 no natao ho teny famelan-keloka,
Taorian’ny fandraisana ny famelankeloka dia nohiraina ny hira FFPM 701 and. 1-2 “Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa ” ary rehefa izany dia natao ny fanekem-pinoana laharaha voalohany.
RADIMISAON Jaonah, mpitandrina no nitondra ny filazan-draharaha.
Ireto ary ny sombin-draharaha voalaza tamin’izany :
– Ny toerana izay nanaovana ny fanompoam-pivavahana tao Antsomjombe dia azo maimaimpoana,
– Eo an-dalana mamolavola ny televiziona ho an’ny FJKM ankehitriny ny Foibe izay hitondra ny anarana TV FJKM Fahazavana
– Efa misy anefa ny pejy « facebook » FTV FJKM
Ny fikambanan’ny Antoko Mpihira no nananteraka ny hira nandritry ny rakitra, Ny diakona isaky ny fiangonana isan’isany no nanantanteraka ny fitatazana izany.
Ny hira fanolorana ny Rakitra dia ny Hira 441 and 1- 3 “Raiso aho, Tompo o !” nofaranana tamin’ny Amena hiraina.
Ny mpitandrina Rakotoarisoa Heritiana Caleb no nanatanteraka izany. Mialoha ny hafatra ho an’ny tanora sy ankizy dia noredonina ny hira FFPM 761 and 1-2 « Ry Jeso Zoky be fitia »
Nanatanteraka vavaka avy hatrany izy tamin’izany ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra, Ny tantara nentiny dia tantaran’ankizy lahy 12 taona izay kamboty ka mipetraka amin’ny dadatoany. Ity farany izay mifoka sy misotro zava-mahadomelina,
Ilay tovolahy kosa dia mazoto manao Sekoly Alahady, ary tany ampianarana ny Soratra Masina no nahazoany lesona fa ratsy ny zava-mahadomelina hany ka izy no nanantra ity dadatoany sy nanohitra izany.
Ny tsianjery izay tiana hampitaina dia hita ao amin’ny Ohabolana 1 / 10 « Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, Aza manaiky »
RANDRIANARIVELO Olivier, mpitahiry vola no nanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny,
Ireto ny peripoka novakiana sy ireo mpanompon’Andriamanitra namaky izany :
– Jos 4, 20-24 : Rtoa ANDRY Nirina Velosoa, Tonian’ny Departemantan’ny Mpiasa sy ny Vola
– Mar 8, 22-28 : Rtoa RAKOTONDRANAIVO Domoina, Tonian’ny Departemantan’ny Sekoly
– Asa 5, 29-32 : Mpitandrina ROBERT SAONINA Marson, mpanampy ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana
Rehefa vita izany dia noredonina ny hira FFPM 179 and 1-3
Ny Mpitandrina ANDRIAMAMPIANINA Zaka Hary Masy no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny teny tao amin’ny Asan’ny Apostoly 5 : 29 no nangalana ny hafatra
« Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona »
1- SAHIA MITORY NY FAMPIANARANA KRISTIANINA :
Na dia efa voarara aza ny Apostoly tsy hitondra ny ananran’i Jesoa Kristy tao Jerosalema, dia tsy nijanona izy ireo. Izany fampianarana izany dia mitohy ankehitriny,
Fony fahiny, dia Kristiainana iray no mitory amin’ny Jentilisa miisa 7, ary ankehitriny efa Kristianina 7 no mitry ho an’ny Jentilisa iray,
I Jesoa dia efa nilaza hoe : « Ataovy mpianatro ny firenena rehetra »
Ary isika eto Madagasikara dia efa voasoratra fa hijanona ho firenena Kristianina eny fa na dia hatramin’ny taona 2128, izany hoe, mbola misy 100 taona ary ho mihoatra,
2 – SAHIA MANONDRO IZAY FOTOTRY NY RATSY
Iza moa no fototry ny ratsy raha tsy isika, ny mpitondra, ny vahiny,Andriamanitra dia tsy namorona ny firenena iray ho firenena mahantra, Tsy tafiditra ao anatin’ny toe-tsaina Kristiaina ny miandry ho tolorana fotsiny.
Raha toa ka mbola :
– misy elanelana avo eo anivon’ny mahantra sy mpanakarena
– mampanjanambola ny vahiny
– miandry ho tolorana fotsiny
dia hanjaka ny tsy fandriapahalemana, ny kolikoly,
Ny fihariana protestanta dia :
– MIASA MAFY
– MANANGONA, MANITARA NY ASANAO
– AZA MIANGINTRAINGITRA
– MANAOVA ASA SOSIALY
– HAJAO NY ZON’NY MPIASA
Izany rehetra izany dia ao anatin’ny Soratra Masina avokoa. Tsy ny tombotsoa anao no kaisainao fa an’Andriamanitra. Amen
Nisy feon-javameneno taorian’ny hafatra, ary dia nanao vavaka setrin’ny toriteny sy vavaka fangatahana ny Atoa RAKOTOMANDIMBY Benjamin, mpanolotsaina Birao Mpiandraikitra Foibe.
Tao anatin’ny Asa vavolombelona no nitondra ny teny Atoa RANDRIAMAMONJISOA Georges Henri, Filoha mpanampy BMF nanao ny fiarahabana ny Filohan’ny FJKM sy nitondra ny teny firarian-tsoa.
Rehefa vita izany dia noredonina ny hira faneva faha 50 Taona ny FJKM,
Nandray fitenenana koa ny filohan’ny FJKM, IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina, tamin’izany no nanaovany jery todika ny taona lasa sy nibanjinany ny asa miandry amin’izao taom-piasana vaovao izao, toy ny fisian’ny Synoda Lehibe izay ho tanterahana any Sambava ka nangatahany ny Kristiana rehetra mba hitondra am-bavaka izany. Nisy ny teny fanentanana izay nataony ka noraisina avy ao amin’ny Soratra Masina I Korintiana 15, 58: « Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo ».
Ireto ny hafatra nozaraina tamin’ny mpino :
– Mandehana amin’ny fitiavana
– Miorena amin’ny finoana
– Miasà amin’ny fahazotoana
– Mifotora amin’ny asan’ny TOMPO (tokony ho faly amin’izany ny TOMPO)
– Mahatsiarova ny mandrakizay
Nataon’ny Fiangonana ny hira FF 9 : “ Isaorana anie Jehovah », ary natolotra ny tsodrano,
Ireo mpikambana teo anivon’ny Birao Mpiandraikitra Foibe sy ireo Mpanatanteraka no nanatontosa manontolo ny fanompoampivavahana,
Ny diakona isaky ny fiangonana avy no nanao ny fitatazan-drakitra.
Ny antoko mpihira mitambatra sy ny mpitendry zava-manenon’ny FJKM no nanafana ny fotoana.
Naka ny sary : RAMAHERY Hasina Nandray an-tsoratra : RANAIVOSON Joël